Channel Istanbul wuxuu soo afjarayaa Badda Marmara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulChannel Istanbul wuxuu soo afjarayaa Badda Marmara
Falanqeeyayaasha Istanbul Oo Soo Afjaray Badda Marmara
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay soo qabanqaabisay "Semitarka Aqoonta Badda Hal ee sanadguurada 564 ee markabka Hali anniversary. Isagoo ka hadlaya aqoon isweydaarsiga. Cemal Saydam wuxuu yidhi, "Mitirka ugu horreeya ee '25 mitir' ee Marmara wuxuu leeyahay Badda Madoow hoosteedana waa biyo cusbo leh. Qaab dhismeedkani waa mid aad u cajiib badan isla mar ahaantaana isku dheelitirnaan weyn ayaa leh. Haddii kanaalka laga hawl geliyo Istanbul, dheelitirkaas waa la carqaladeyn doonaa Badda Marmarana way dhiman doontaa. ”
Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM) waxay isu keentay aqoonyahano, suxufiyiin, qolal xirfadlayaal ah, wakiilo ka socda ururada aan dawliga ahayn ee ay khusayso iyo wakiilo ka socda waaxda bada ee fadhiga shaqo ee Deniz. Kordhinta saamiga badda ee gaadiidka dadweynaha, is-dhexgalka gaadiidka, maareynta badda ka dib dhulgariir, isbeddelka cimilada iyo qorsheynta gaadiidka badda ayaa loo qiimeeyay qaab dhameystiran. Is-dhexgalka Istanbul ee badda iyo aragtida Canal Istanbul ayaa la sheegay. Kahor fadhiyada aqoon isweydaarsiga, Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul Ekrem Imamoglu wuxuu mar kale adkeeyay burburka magaalada iyo Badda Marmara. Cemal Saydam wuxuu yidhi, sonuç cawaaqibka ku ciyaarista dabeecada lama sii saadaalin karo. Badda Marmara ma xamili karto culayska isku xirka cusub. Kul
MAGAALADA BADAN EE BADAN
Aqoon isweydaarsiga ayaa diiradda lagu saaray toban mawduuc oo mowduuc ku saabsan saddex kal-fadhi oo waaweyn waxaana lagu qabtay Haliç Shipyard. Kalfadhigii ugu horreeyay ee Gaadiidka Badda ee Istanbul, halkaas oo dhibaatooyinka iyo xallinta gaadiidka badda looga wada hadlo si faahfaahsan, ayaa loo soo bandhigay Dr. Waxaa haga Kabtan Özkan Poyraz. Khudbadii ugu horeysay. Dr. Reşat Baykal wuxuu cinwaan uga dhigay "Dün Past, Waqti iyo Berrito Gaadiidka Magaalada Badda ee Magaalada Istanbul". Baykal, laga bilaabo Gobolka Seljuk ilaa maantadan la joogo, isagoo ka hadlaya aragtida taariikhiga ah, nidaamka gaadiidka badda ee 1950'den wuxuu mudan yahay adkeynta asalka ah ee nidaamka safarka caagga ah ee culeyska lagu adkeeyay oo lagu nuuxnuuxsaday inuusan ahayn mid waari kara.
Tansel Timur, af-hayeenka kale ee kalfadhiga, wuxuu xasuusiyay dhulgariirkii Istanbul in khubaradu ka digeen oo uu yiri:
“Istanbul waa magaalo taariikh iyo bad leh sidoo kale dhulgariir. Dhibaatooyin gaadiid oo waaweyn ayaan kala kulanay Dhulgariirkii Gölcük. Dhamaanteen waxaan xasuusanahay daahitaanno dhaaftay saacadaha 48. Khibraddan qadhaadh ee lt waxay noo muujisay in; Waxaan u baahanahay inaan horumarino gaadiidka badda oo aan ku biirno dhammaan nidaamyada kale ee gaadiidka si aan ugu diyaar garoobo musiibada soo socota. ”
Af-hayeenka saddexaad ee kalfadhiga ayaa Dr. Haksmail Hakkı Acar wuxuu cadeeyay in Istanbul mudo sanado ah cadaadis ku haystay magaalooyinka oo ay isticmaaleen hadalada soo socda:
“Istanbul waxay dooneysaa in lagu balaariyo waqooyiga halkii laga dhisi lahaa xeebta. Arintan ayaa nasiib daro ku keentay Istanbul, oo kumanaan sano badda magaalo u ahayd, inay lumiso muuqaalkeeda oo ay noqoto magaalo dhul leh. ”
Hadalkii ugu dambeeyay ee kalfadhiga koowaad wuxuu ahaa Prof. Dr. Dr. Mustafa Insel, isaga oo carrabka ku adkeeyay isbadalka cimilada, wuxuu sheegay in loo baahan yahay in xalka deegaanka la horumariyo. Sel In kasta oo aan arki karno saameynta kuleylka adduunka iyo barafka dhalaalaya biraha ka hor, waxaan sidoo kale ku arki karnaa saameyntaas magaaladan sidoo kale. Waxaan u baahan nahay inaan dardar-galno kala-guurka tikniyoolajiyadda korantada ee gaadiidka. ”
WAA INAAN ILAAHAYNAA MONTRE
Professor Dr. Kalfadhigii labaad ee uu hogaaminayay Haluk Gerçek, Kanal Istanbul waxaa lagala hadlay dhinac kasta. Afayeenka koowaad ee kalfadhiga ayaa ahaa Assoc. Dr. Jale Nuur Ece wuxuu carrabka ku adkeeyay in Montreux ay door weyn ka qaadatay nabadeynta gobolka iyo adduunka ee geeddi socodka sanadlaha ah ee 83 waxayna ka digtay:
Açmak Furitaanka Montreux ee wadahadalka waxay halis gelin doontaa luminta madaxbanaanideena iyo xuriyadayada badda iyo madaxbanaanideena Badda Madow. Waa inaan ka fogaano tan oo aan difaacnaa sii wadida Montreux. Waa lama huraan in aan ka ilaalinno guulaha aan ka helnay Montreux. ”
WAA MAXAY SAMEEYN KARTAAN CHANNEL?
Kalfadhiga, İstanbul Channel Istanbul Maxaysan Tahay? Prof. cinwaankiisu waa digniino ku saabsan khataraha sugaya Marmara. Dr. Cemal Saydam, mid kasta oo leh sifooyin kala duwan oo midba midka kale, oo hoosta ka xariiqaya in Turkey waxaa marti badda xeebaha. Saydam wuxuu yiri, geçmek ka gudbida Badda Madow ilaa badda Mediterranean micnaheedu waa in laga gudbo xaaladaha ugu adag adduunka. Haddii aad fahanto labadan badood, markaa waad si buuxda u fahmi kartaa Marmara. Marmara, oo la aasaasay sanadihii ugu dambeeyay ee "3500", ayaa xasaasi u ah sidaa darteed ma noolaan karto haddii aan sidan sii wadno ".
Saydam, oo isbarbar dhigaya cunugga astaanta u leh 'Deniz' ee badda Badda Marmara, wuxuu sii watay hadalkiisa sida soo socota:
“Markaad furato bad labaad oo ah Badda Madow, biyuhu si deg deg ah ayey ugu qulquli doonaan badda Marmara. Waraaqda dufanka badan ee nafaqada ayaa cadaadis ku saari doonta substrate-ka sidaas darteedna ogsijiinku si dhakhso leh ayuu u yaraanayaa. Marka oksijiinku ka baxo, dib uma noqonayso. Waad ogtahay estamentans urku hore. Markan, ma aha oo kaliya geeska Dahabka ama Baasbooriyada laakiin gebi ahaanba Marmara way dhiman doonaan. Dhimashadani waxay keenaysaa hydrogen sulfide. Mid ka mid ahi ma leh dareen ka sarreeya dhammaan urka. Laakiin waxaan dhammaanteen u urin karnaa maandooriyaha, xittaa milyan ahaan. ”
Cilmi Baadhis Cihan Uzunçarşılı Baysal ayaa khudbaddii ugu dambeysay ka jeediyay fadhiga Channel Istanbul. Baysal, Qiimaha Kanal Istanbul, dhaqaalaha, deegaanka, deegaanka iyo heshiisyada caalamiga ah ayaa laga wada hadlay iyada oo laga hadlayo mowduucyo badan oo kala duwan; laakiin wuxuu yiri dadka waa la iloobey:
Iz Waxaan u baahanahay inaan ka hadalno sida dadka deegaanku ay dareemayaan gobolka Waqooyi-dhireed, oo lagu dhawaaqay aagagga Mashaariicda Mega. Dadka lagu sheegay warbixinta EIA laakiin waxay sheegeen kaliya sida tirooyinka aysan ogeyn waxa mustaqbalkoodu noqon doono. Wax fikir ah kama lihin waxa ku dhacay dadka ku nool garoon diyaaradeed cusub. Isla aayahaasi dadka ayaa sugaya. Dadka halkan ku noolaa qarniyo, beero iyo xooluhu kuma noolaan doonaan dhulkii awow. Dhulkooda wuxuu hadda ku jiraa gacanta shirkadaha waaweyn. Shirkadahaasi waxay tuulooyinka u beddeleen dhul isweydaarsi. Waxaan la hadalnay madaxda tuulooyinkaas. Ku dhawaad ​​dhammaantood ma doonayaan mashruucan. ”
Waxaa daadihinaya weriye, barnaamij telefishan iyo dhaqaaleyahan Cem Seymen, dhaqanka badda ee magaalada ayaa lagaga wada hadlay kalfadhigii ugu dambeeyay. Xusuus-qorka xarunta dhexe ee dhaqdhaqaaqa Bandirma Ferry, Seymen wuxuu adeegsaday ereyada soo socda:
“Ingiriisku wuxuu isku dayaa inuu helo qori isagoo wacaya Bandirma Ferry. Waxay u malaynayaan in Atatürk si qarsoodi ah hubka ugu waday Anatolia. Atatürk wuxuu ku dhawaaqayaa ereyadan cajiibka ah ee ku saabsan: 'weligood ma heli doonaan waxay raadinayeen. Maxaa yeelay, weligood ma arki karaan jacaylka waddankeena dhexdeena ah. ' Tani waa wax soo saar wanaagsan. Markasta oo aan ka gudbo hore ee Tower Maiden, waxaan ka fikiraa inaan joojiyo doonida Mustafa Kemal Atatürk oo aan codsado fiise. Kuwaan maanta aad ayaan uga fognahay. Waxaan nahay waddan calankeeda ku muteystay Jamhuuriyadda. ”
Casharkii Dhaqanka Badda, qoraaga Sunay Akin wuxuu khudbadiisa ku sheegay inuu ku bilaabay ixtiraam Mustafa Kemal Atatürk iyo Bandırma Ferry, kuwaas oo bedelay nasiibkii umadda markay ka soo guureen magaaladan boqol sano ka hor.
“Waxaan ka hadlaynaa Kanal Istanbul, dhaqan muhiim ah oo waxbarida Barbaros Hayreddin, Turgut Reis, Salih Reis iyo Piri Reis, oo aan wax shaqo ah ku lahayn badda maanta. Mashruucu wax shaqo kuma leh arrimaha badda. ”
WAA INAAN SHAQEEYAAN GUDAHA
Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Gaadiidka İbrahim Orhan Demir ayaa khudbad xiritaan ah ka jeediyay gabagabada aqoon isweydaarsiga. Demir wuxuu ku bilaabay khudbadiisa isagoo u mahadcelinaya kuwa hadlay iyo kaqeybgalayaasha oo yiri, "Arrimo muhiim ah waa la taabtay. Dhammaan mashruucyada iyo soo jeedimaha xalka ayaa la soosaarayaa waxaa soo sheegi doona IMM waxaana lala wadaagi doonaa dadka ay quseyso iyo shacabka. ”
Qalcadda Eurasia ayaa laga dhisi doonaa badweynta Marmara
Mashruuca garabsiinta miyuu yahay dhibaatada gaadiidka ee Istanbul
Waa xasuuq si loo furo degaanka mulkiilaha
Miyuu baabuur fiilo u yahay Sumela Monastery?
Mashruuca Kocaeli Cable?
Koonfurta Kawaanka ayaa la furi doonaa? Maxaa dhacaya haddii ay furanto?
Gaadiidka Magaalada Istanbul
Maxaa Channel Istanbul
Kusoo Dhawaada Channel Istanbul